Somaliland.Org » Madaxweynaha Oo Shahaadooyin gudoon siiyay dufcadii 9-aad ee qalin jabisay Jaamacadda Hargeysa
Madaxweynaha Oo Shahaadooyin gudoon siiyay dufcadii 9-aad ee qalin jabisay Jaamacadda Hargeysa
September 15th, 2012 Comments Off ‘Ardayda Jaamacadaha ka soo baxayaa waxay ka mid yihiin mustaqbalkii dalka’
Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa maanta shahaadooyin gudoon siiyay dufcadii 9-aad ee ka qalin jabisay Jamaacadda Hargeysa oo tiradoodu ahayd 637 arday.
Xafladaasi waxa kale oo ka soo qeyb galay Guddoomiye Ku xigeenka labaad ee Golaha Wakiiladda, Guddoomiyeyaasha xisbiyada KULMIYE, UCID. waxa kale oo madashaasi goob joog ka ahaa xubno ka mid ah Golaha Wasiirrada oo ay ka mid ahaayeen Wasiirrada waxbarashada, Qorshaynta, Madaxtooyada, Cadaalada Beeraha, aqoonyahano iyo kumanaan qof oo ka mid ah waxgaradka iyo mudanka bulshadda Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), oo ka hadlay xafladaasi ayaa Bogaadiyay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Hargeysa, waxaanu tilmaamay Inay dalkooda u shaqeeyaan.
Madaxweynuhu waxa uu xusay in ardayda jaamacadaha ka soo baxayaa ay yihiin midhihii mustaqbalka dalka, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Ardayda Jaamacadaha ka soo baxayaa waxay ka mid yihiin mustaqbalkii dalka. Dalkeenu wuu balaadhan yahay, waanu dihin yahay oo waa dal wax laga qaban karo oo mustaqbal wanaagsan leh. Waxaanan mar kale bogaadinayaa oo aan dhiiri gelinayaa ardayda qalin jabisay waalidkii iyo macalimiintii ku tabcay.”
Guddoomiyuhu wuxuu intaasi ku daray inay jaamacadda Hargeysa ay hiigsanayso inay daboosho baahida waxbarashada sare isla markaana ay gaadho jaamacadaha caalamiga ah.
Geesta kale, Madaxweyne Ku xigeenkii hore ee Somaliland Md. C/Raxmaan Aw Cali Faarax oo ku hadlayay magaca ardaydii qalin jabisay ayaa ammaan balaadhan u soo jeediyay maamulka iyo macalimiinta Jaamacadda Hargeysa oo uu tilmaamay inay ka midho-dhaliyeen dedaal adag oo ay sameeyeen afartii sano ee u dambeeyay.
Ugu dambayn waxa madaxweynuhu shahaadooyin gudoon siiyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Hargeysa.